စစ်တွေမြို့၊ နာဇီရွာမှနောက်ဆုံးသတင်း (မြန်မာစံတော်ချိန် - နံနက် ၃း၃၀ နာရီ) ~ Rohingya Blogger
စစ်တွေမြို့၊ နာဇီရွာမှနောက်ဆုံးသတင်း (မြန်မာစံတော်ချိန် - နံနက် ၃း၃၀ နာရီ)
ည ၁၂ နာရီခွဲခန့်မှာ ရခိုင်များအမှောင်ကိုဖြတ်၍ မာရ်ကာစ်ဗလီကိုရောက်ရှိလာပြီး ဗလီကိုဖျက်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ သို့သော်မွတ်စလင်မ်များနိုးကြားမှုကြောင့် လူစုလူဝေးဖြင့် ရခိုင်များအားမောင်းထုတ်ခဲ့သည်။ ရခိုင်တယောက်အား ၀ိုင်းရိုက်နေသည့်အချိန် ရွာလုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားသော စစ်သားများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များရောက်ရှိလာပြီး အခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။ ယခုအခါ လုံခြုံရေးကိုတင်းကျပ် ထားသည် ဟု သတင်းရရှိပါသည်။
ဤသတင်းမှာ ရွာကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်၍ရရှိသည့်သတင်းဖြစ်သည်။စစ်တွေမြို့.. Newer Post
ERCA7 June 2012 05:57As the Rohingya Society ERCA, wish the problem to be soled peacefully by internal government, taking necessary action preventing any further brutal attacks.We also worry, if any mutual attacks will be occurred All NGO societies and we totally can not allow such attacks which can lead to religious crisis .we will be expecting forward to see solution .Let peace be to all nation in Myanmar and oversea people. We are desired to declare towards the nations all aver the world to be in peace, stop fighting each other ,one nation by another.The time has come to be united in one.ReplyDeletekyaw win16 July 2012 13:23be peace every one muslim and buddist rakhine was born in myanmar also rohingya tooall are from myanmar be peace each other stop attacking each other understand each otherReplyDeleteAdd commentLoad more...